အိတ်ချ်အိုင်ဗွီ ရောဂါပိုး - ဝီကီပီးဒီးယား
HIVသည် လူ့ကိုယ်ခံအားကိုကျဆင်းစေသော ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ HIV ပိုးကူးစက်ခံရပါက ၎င်းပိုးသည် ပြင်ပပစ္စည်းများ၊ ရောဂါပိုးမွှားများကို တိုက်ထုတ်ပေးသော သွေးဖြူဥဆဲလ်များကို ဖျက်စီးပစ်သည်။ ထိုအခါ ကူးစက်ခံရသူတွင် ကိုယ်ခံအားကျဆင်းပြီး ပြင်ပမှရောဂါများ အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ထိုသို့ ကိုယ်ခံအား ဖျက်ဆီးခြင်း ခံရခြင်းကို ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ (AIDS) ဟုခေါ်ပါသည်။
၂ လိင်ဆက်ဆံမှုမှ တဆင့်ကူးစက်ခြင်း
၄ HIV / AIDS ရောဂါကို ကုသနိုင်ပါသလား
၅ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ HIV ပိုးဝင်ရောက်ခြင်းမှ ဘယ်လို တားဆီးနိုင်သလဲ၊
၆ HIV ပိုးရှိမရှိ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
၇ AIDS ရောဂါ လက္ခဏာ များကတော့
၈ HIV/AIDS ၏ သမိုင်းမှတ်တိုင်များ
၉ လိင်တူဆက်ဆံသူများအကြား အသုံးပြုလေ့ရှိသည့် လိင်ဆက်ဆံနည်းများ
HIV ရောဂါပိုးရှိသူ တစ်ဦးနှင့် အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ လိင်တူ၊ လိင်ကွဲ ဆက်ဆံခြင်း၊ (မိန်းမကိုယ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ စအိုဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပါးစပ်ဖြင့်လည်းကောင်း ကွန်ဒုံးကဲ့သို့သော အကာအကွယ် ပစ္စည်း မသုံးပဲ လိင်ဆက်ဆံခြင်း)
သွေးမှ တဆင့်ကူးစက်ခြင်း၊ ရောဂါပိုးရှိသူ. သွေးကိုသွင်းမိခြင်း၊ ရောပိုးရှိသူနှင့် ချွန်ထက်မြက်စူးရှတတ်သော အသုံးအဆောင်များ မျှဝေသုံးစွဲခြင်း၊ (ဥပမာ- ဘရိတ်ဓား။ ဆေးထိုးအပ်။ ဆေးမှင်ကြောင်ထိုးခြင်း)
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်မှ သန္ဓေသားကို ကူးစက်ခြင်း၊ ရောဂါပိုးရှိသော မိခင်မှတဆင့် ၎င်း. ကလေးထံသို့ သားဖွားစဉ် (သို့) ကလေး နို့ရည်တိုက်ကျွေးခြင်း၊
HIV ရောဂါပိုး ပုံစံကားချပ်
HIV ပိုးသည် ခြင်။ ကြမ်းပိုး ကိုက်ခြင်းမှတဆင့် မကူးစက်နိုင်ပါ၊
HIV ပိုးသည် နှာချေခြင်း။ ချောင်းဆိုးခြင်း မှတဆင့် မကူးစက်နိုင်ပါ၊
HIV ပိုးရှိသူတစ်ဦးနှင့် အိမ်သာတစ်ခုတည်းကို အတူတကွအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရောဂါမကူးစက် နိုင်ပါ၊
HIV ပိုးရှိသူတစ်ဦးနှင့် ပွေ့ဖက် နမ်းရှုပ်ခြင်းဖြင့် ရောဂါ မကူးစက်နိုင်ပါ၊
HIV ပိုးရှိသူတစ်ဦး၏ အဝတ်အစားများကို ဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ရောဂါမကူးစက် နိုင်ပါ၊
HIV ပိုးရှိသူတစ်ဦးနှင့် အစားအသောက်အတူစားခြင်း၊ ပန်းကန်တစ်ခုထဲတွင် စားသောက်ခြင်းဖြင့် ရောဂါပိုး မကူးစက်နိုင်ပါ၊
HIV / AIDS ရောဂါကို ကုသနိုင်ပါသလားပြင်ဆင်
မကုသနိုင်ပါ၊ ယခုတိုင် HIV ရောဂါကို မကုသနိုင်သေးပါ။ ၎င်းအပြင် ကျွန်ုပ်တို့ကို HIV ပိုးကူးစက်ခြင်း မခံရအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်သော ဆေးလည်းမရှိသေးပါ။ ကျွန်ုတို့ လုပ်ဆောင်နိုင်တာ တစ်ခုတည်းသော အရာကား HIV ပိုးများ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ မဝင်ရောက်နိုင်အောင် ကာကွယ်တားဆီးခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ HIV ပိုးဝင်ရောက်ခြင်းမှ ဘယ်လို တားဆီးနိုင်သလဲ၊ပြင်ဆင်
လိင်ဆက်ဆံသောအခါတိုင်းတွင် ကွန်ဒုံး ကို အသုံးပြုခြင်း၊
ဆေးထိုးအပ် (သို့) သင့်အရေပြားကို ထိုးဖောက်နိုင်သော အခြားပစ္စည်း ကိရိယာများကို ကောင်းမွန်သေချာစွာ ပိုးသန့်ပြီးမှ သုံးစွဲပါ၊ မလိုအပ်သော အရေပြားထိုးဖောက်ခြင်းကို ရှောင်ပါ၊ ဥပမာ- ဆေးမင်ကြောင်ထိုးခြင်း၊
သွေးသွင်းရန် အသုံးပြုမည့် သွေးကို HIV ပိုးမရှိကြောင်း သေချာစေရန် စစ်ဆေးရမည်၊ တခြားသူများ၏ သွေး (သို့) ကိုယ်အရည်များနှင့် ထိတွေ့ရသော အလုပ်ကို သင်လုပ်ကိုင်ရပါက လက်အိတ်များစွတ်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်ပါ၊
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်များသည် မိမိတွင် HIV ပိုးရှိကြောင်း သိရှိပါက လျင်မြန်စောစီးစွာ ဆေးကုသမှု ခံယူရမည်၊ သားဖွားပြီးနောက် ကလေးကို မိခင်နို့ရည်မတိုက်ပဲ အထူးဖော်စပ်ထားသော နို့မုန့်များကိုသာ တိုက်ကျွေးရမည်၊
HIV ပိုးရှိမရှိ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲပြင်ဆင်
အပြင်ပန်းကြည့်ရုံနဲ့ မသိနိုင်ပါဘူး။ ရောဂါပိုးရှိသူဟာ သာမန်လူတွေလိုဘဲ ကျန်းမာသန်စွမ်းနေနိုင်ပါတယ်။
ရောဂါပိုး ရှိ၊ မရှိ ကို သွေးစစ်ကြည့်မှသာ သိနိုင်ပါတယ်။
HIV ပိုးဝင်ပြီး အင်တီဘော်တီ လုံလုံလောက်လောက်ထက်ဖို့ရာ အချိန် သုံးလကြာတဲ့အတွက် ပထမအကြိမ် သွေးစစ်ပြီး HIV ပိုးမရှိသော်လည်း နောက်သုံးလအကြာတွင် သွေးထပ်စစ်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။
AIDS ရောဂါ လက္ခဏာ များကတော့ပြင်ဆင်
ပါးစပ်အတွင်း မက်ခရု ပေါက်ခြင်း၊
HIV/AIDS ၏ သမိုင်းမှတ်တိုင်များပြင်ဆင်
၁၉၈၁ခုနှစ်-အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ပထမဆုံး အေအိုင်ဒီအက်စ်ဝေဒနာရှင်ကို ဆေးပညာအရအတည်ပြုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
၁၉၉၁ခုနှစ် - Queen တေးဂီတအဖွဲ့မှ နာမည်ကျော်တေးသံရှင် Freddie Mercury သည် AIDS ရောဂါနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ရောဂါဝေဒနာဖြင့်သေဆုံးခဲ့သည်။
အနီရောင် ဖဲပြားလေးသည် HIV ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သင်္ကေတဖြစ်လာသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် HIV ရောဂါစွဲကပ်နေပေါင်း၁၀သန်းခန့်ရှိနေကြပြီး အသက် ၂၅နှစ်မှ၄၄နှစ်အကြားအဖြစ်များကြသည်ကိုလေ့လာတွေ့ရှိရသည်။
၁၉၉၅ - အရှေ့ဥရောပတွင်ဆေးတင်သွင်းသူများနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးထိုးသူများမှ HIV Virus ကူးစက်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် HAART(Highly Active Antiretroviral Therapy) ခေါ် စုပေါင်းရောဂါကုထုံးတစ်ရပ်ကိုအသုံးပြုရန်အတည်ပြုခဲ့သည်။
၁၉၉၆ - HIV Virus ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်သည့် ထိုးဆေးကိုစမ်းသပ်ခဲ့၏။
လိင်တူဆက်ဆံသူများအကြား အသုံးပြုလေ့ရှိသည့် လိင်ဆက်ဆံနည်းများပြင်ဆင်
များသောအားဖြင့် လိင်တူဆက်ဆံသူတွေ ကြားမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ လိင်ဆက်ဆံနည်းတွေကတော့ -
လိင်အင်္ဂါကို ပါးစပ်နှင့် ဆက်ဆံခြင်း၊ (69 ပုံစံဖြင့် ဆက်ဆံခြင်း)
အချင်းချင်း လက်ဖြင့် အာသာဖြေသည့်နည်းဖြင့် ဆက်ဆံခြင်း၊
လိင်တံတု (သို့) လိင်ကစားစရာများနှင့် ဆက်ဆံခြင်း၊ စသည့်နည်းတွေကို အသုံးပြုလေ့ရှိ ကြပါတယ်၊
http://him.civiblog.org Archived 11 October 2011 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အိတ်ချ်အိုင်ဗွီ_ရောဂါပိုး&oldid=704704" မှ ရယူရန်
၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။